शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०३ : ३८
हिट लाेकगीत सालकाे पातका गायक भन्छन् ‘प्रियंकाजीले हेपेर सालको पातमा नाच्न रिजेक्ट गर्नुभएछ’
‘आफू फिल्मका कलाकार भएँ भन्दैमा हात मिलाउन पनि गाह्रो मान्नु भएन । आखिर विदेश जाँदा धेरै फिल्मका कलाकार लास्टाँमा दर्शक र आयोजकको मागअनुसार नाच्ने त दोहोरी गीतमै हो ।’
लाखौं खर्च गरेर पाएको भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका, मेडल ट्रफी र सर्टिफिकेट मात्र हो । महँगो सप्लिमेन्ट, पानी पनि नखाई छाला पटपट फुट्ने गरेर बसेको सउना बाथ, प्रत्येक ६ महिनामा गर्ने होल बडी चेकअप सबै खर्चको कुरा गर्ने हो भने त तनावै हुन्छ नि !
‘मुम्बई हिँडेको झापा पो आइपुगेँ’
राज थापा चल्तीका कलाकार हुन् । धरानको पहिलो नाट्य समूह ‘अनाम नाट्य जमात’ का संस्थापक, समेत रहेका उनी २०४० सालमा रंगमञ्चमा छिरेर अहिलेसम्म निरन्तर रमाइरहेका छन् । अभिनयमा पोख्त राजले फिल्म लेखन, निर्देशन मात्रै होइन गीत गाउने र लेख्ने पनि गर्छन् । राजसँग मनोज घर्तीमगरले गरेको कुराकानी ।
'रंगमञ्चका दुर्व्यवहार नाटककै माध्यमबाट भन्ने मन छ'
'हामीबीच दुव्र्यवहार गर्ने को हो, के हो नाम सबै थाहा छ । ओपन सेक्रेटजस्तै छ । म तीनजना थिएटरका यस्ता नाम भन्दिन सक्छु जो दुव्र्यवहारमा संलग्न छन् तर के भने उनीहरु नाटकका पावरफुल पर्सन हुन् ।'
नेपाली फिल्मका लागि बिल्कुलै नयाँ अनुहार हो– शिल्पा मास्के । उनले लिड रोलमा अभिनय गरेका दुई फिल्म ‘ब्रेकअप’ र ‘कागजपत्र’ तीन हप्ताको अन्तरालमा रिलिज हुँदैछन् । ‘हरपल’ बोलको गीतमा शिल्पाले आशिरमान श्रेष्ठसँग दिएको किस सिन अहिले चर्चामा पनि छ । शिल्पाले तीन वर्षअघि हलिउडको सुपरहिरो फिल्म ‘डक्टर स्ट्रेन्ज’मा ४५ सेकेन्डका लागि अभिनय गरेकी थिइन् ।
‘रियालिटी सो चर्चामा आउने छोटो बाटो’
सबैले आफूलाई ध्यान दिँदा रमाइलो त लाग्ने नै भयो ! यति धेरै फोन आइरहेको छ र फोन उठाउन नपाउँदा मेरा शुभचिन्तकले ठूलो मान्छे भएछ अब त भनेको पो सुन्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।
‘नाच फिरिरीको यत्रो चर्चा होला भन्ने लागेको थिएन’: महेश काफ्ले
निश्चल दाइले गीत फिल्ममै राख्न खोज्नुभएको हो तर आसिफ दाइले गायकको पनि प्रमोट होस्, पहिलो कमब्याक सङ हो भनेर भिडियो नै बनाऊ भन्नुभयो ।
डा. तारानाथ शर्मा र शान्ताकाे ५० वर्षे प्रेमिल यात्रा : जोडी त राम्रै हो हाम्रो । त्यस्तो सूत्रभन्दा पनि प्रेमको सम्बन्ध, स्नेहको सम्बन्ध हो । आफूलाई यस्तो माया गर्ने मान्छे कहाँ पाउनु ? प्रेम गरेको मान्छेसँग झगडा भन्ने नै हुँदैन । उसले जे गरेको पनि मन पर्छ । पूरै समर्पित पो भइन्छ त हौ !
'कपिल शर्माले एउटा कलाकार ल्याएर कार्यक्रम गरे भने अब विश्वले त्यस्तो कार्यक्रम गर्न नपाउने भन्ने त पक्कै छैन होला तर यति भन्दाभन्दै पनि फेरि भन्छु, बिउ चाहिँ एउटै हो । मुहान एउटै हो । भारतमा कपिल शर्मा सो हुन्छ भने यहाँ जितु नेपाल सो किन नहुने ?'
-यापर भीटेन :'-याप गाउँदा बहुला जस्तो के गरिरा’ भन्थे’
र्याप गाउँदा ए, बहुला जस्तो के गरिरा भनिरहनुहुन्थ्यो तर त्यो चिजले मलाई कहिल्यै छोएन । मलाई मज्जा आउँथ्यो नि त ! जसले जे भने पनि यो पनि आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने एउटा पारा हो नि त !
तीन वर्षअघि फिल्मको हिरोइन खोज्ने क्रममा भेट भएकी नायिका दीपिका प्रसाईं र निर्देशक दिवाकर भट्टराईले उहिल्यै कोर्ट म्यारिज गरे तर यी दुवैको इङ्गेज्मेन्टको चर्चा अहिले चुलिएको छ । यस बीचमा थाइल्यान्डमा १५ दिन घुमेर दुवै शनिबार स्वेदश फर्किएका छन् । स्वदेश फर्किएलगत्तै उनीहरु आफ्नो सम्बन्धबारे शुक्रवारकर्मी अनिल यादवसँग खुलेर प्रस्तुत भए ।
‘यहाँ धेरै छन् दुव्र्यवहार गर्नेहरु । धेरै बहिनीहरुले मलाई कथा सुनाएका छन् । हामी जसलाई भगवान् मानिरहेका छौँ, जसलाई रेस्पेक्ट गरिराछौँ तिनै भगवानहरुले दुव्र्यवहार गरेको मैले सुनेकी छु । यहाँ बोल्ने हो भने धेरैको धज्जी उड्नेवाला छ ’
‘धर्म संस्कृतिलाई त निमिट्यान्न पारेर छोड्यौँ’
मासुसँग मदिरा पनि खाइरहेका छन् मान्छेहरु । सबैभन्दा बढी मासुको क्रय विक्री मुलुक पनि यही हो । तर यही मुलुक बढी धार्मिक मुलुक पनि हो । मांसाहारी भएर शक्ति उपासना गर्नु ठीक होइन ।
‘जब कलाकारमा इगो हुन्छ, डाउनफल सुरु हुन्छ’
यहाँ सुपरस्टार हुनु, फेमस हुनु कुनै बिग डिल होइन । मिहिनेत गर्नुस, भइन्छ तर त्यसलाई कसरी लामो समयसम्म लाने त्यो सुपरस्टार हुनुभन्दा ठूलो कुरा हो ।
एकताका नेपाली पप संगीतको दुनियाँमा निकै चम्किएका थिए, नवीन के. भट्टराई । जताततै उनको स्वर गुन्जिन्थ्यो । उनले गाएका ‘साँझ पख’, ‘डर लाग्छ’, ‘खाँदै नखाको विषले’, ‘तिमी हौ लाखौंको धड्कन’, ‘छैन जून’ आदि बोलका गीत अझै श्रोताले बिर्सिएका छैनन् । तर अचेल उनी पहिलेजस्तो चर्चामा छैनन् । उनको आरोह–अवरोहबारे गरेको अन्तरंग कुराकानी:
‘पचास लाख पारिश्रमिक हल्ला मात्रै हैन’
अहिलेको अवस्थामा मैले एउटा फिल्म साइन गर्दा निर्माताले इन्टरनेसनल राइट्सबाट मात्रै डेढ–दुई करोड पाइरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म कोही निर्माताले घाटा ब्योहोरेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले मलाई मलाई ५० लाख दिनु कुनै ठूलो कुरा पनि त रहेन ।
ठमेलका लाउन्जहरुको फेसबुक पेजमा फाट्टफुट्ट डान्सिङ स्टार सुशान्त खत्री देखिएपछि खोज्दै जाँदा उनी भेटिए ठमेलको टर्टल लाउन्ज एन्ड क्लबमा । आइतबार बेलुका साढे ८ बजेतिर पुग्दा उनी फ्यानले घेरिएका थिए र तस्बिर खिचाउन व्यस्त देखिन्थे । काठमाडौंको कपनबाट भारतको गुजरात पुगेर भारतीय डान्सिङ रियालिटी सो ‘डान्स प्लस’मा डान्सिङ स्टार बनेका उनी हिट हिन्दी फिल्म एबिसिडीको तेस्रो सिक्वेलबाट बलिउडमा डेब्युसमेत गर्दैछन् ।
‘अहिले बिहे ग-यो भने त बाल विवाहको कानुन लाग्छ’
तीजमा व्रत बस्ने सबै महिलाले राम्रो श्रीमान् पाउनुभएको छ र ? यसको त ग्यारेन्टी छैन । व्रत बस्नेको रक्सी खाएर पिट्ने बुढा पनि पाएका छन् । जे कुरामा ग्यारेन्टी छैन, त्यसमा किन जोखिम मोल्ने (हाँस्दै) ।
'युकेबाट सुटिङ गरेर फर्किनेबित्तिकै साम्राज्ञीको ब्रेकअपको कुरा बाहिर आयो । त्यसैले युकेमा केही भयो होला त्यसैले ब्रेकअप भएको भन्ने माइन्डसेट अडियन्सलाई बनेको हुनसक्छ । तर हामीबीच शंका गर्नुपर्ने त्यस्तो केही भएको छैन । भएको भए हामी क्लियर गथ्र्यौं'
पछिल्लो समय युवापुस्ताले रुचाएकी गायिका हुन्, निखिता थापा (मगर) । चाहे सुगम पोखरेलसँग गाएको ‘मायाले बोलेको बोली मीठो भो’ होस् या ब्रिजेश श्रेष्ठसँग मिलेर गाएको ‘कान्छी हे कान्छी’ कभर गीत होस्, स्रोताले खुब रुचाएका छन् । भारतको दार्जिलिङमा जन्मिएकी उनले ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ फिल्ममा साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहका लागि स्वर दिएको ‘उडायो हावाले’ गीत अहिले हिट छ ।